USA တွင်ခိုလှုံခွင့်: 2018 change to USCIS process | USAHello | USAHello
USA တွင်ခိုလှုံခွင့်: 2018 change to USCIS process
There isanew process for asylum in the USA. Starting in 2018, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုများ (USCIS) ၎င်း၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြောင်းလဲသွား. New applicants will receive their hearings first. People who are already waiting forahearing will have to wait longer.
ဓာတ်ပုံ: Hector Silva – courtesy of Customs and Border Protection
ထက်ပိုပြီး 300,000 people are waiting to hear about their asylum applications in the USA. ဒါဟာသူအပေါငျးတို့ applications များကို process မှအချိန်အနည်းငယ်ကြာအပေါင်းတို့နှင့်အတူလျှောက်ထားအင်တာဗျူးပါလိမ့်မယ်.
ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုများ (USCIS) changed its process for interviewing asylum applicants in 2018. ဒါဟာပထမဦးဆုံးအသစ်ကလျှောက်ထားတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းများနှင့်ပြောင်းပြန်နိုင်ရန်အတွက်စာရင်းကတဆင့်ပြန်အလုပ်လုပ်. Read the USCIS information about asylum interview scheduling.
ပထမဦးစားပေး: Applicants who were scheduled for an interview, ဒါပေမယ့်အင်တာဗျူးလျှောက်ထားရဲ့တောငျးဆိုခကျြသို့မဟုတ် USCIS များ၏လိုအပ်ချက်များမှာ်ပြီးခံရဖို့ခဲ့.
ဒုတိယအချက်မှာဦးစားပေး: ဆိုင်းငံ့ခဲ့ကြကြောင်း Applications ကို 21 ရက်ပေါင်းဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း.
တတိယဦးစားပေး: အားလုံးသည်အခြားဆိုင်းငံ့အပြုသဘောဆောင်နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် applications များအသစ်များ FILE နဲ့စတင်ပြီးပြန်အဟောင်းတွေ FILE ဆီသို့ဦးတည်လုပ်ဆောင်နေအင်တာဗျူးအဘို့စီစဉ်ထားပါလိမ့်မည်.
သငျသညျခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားခဲ့လျှင်, you may apply forawork permit 150 ရက်အကြာတွင်. သငျသညျကိုလက်ခံသို့မဟုတ်ငြင်းပယ်နေကြသည်သည်အထိထိုအခါသင်သည်အလုပ်လုပ်နိုင်. USCIS သစ်ကို process ကိုဖွင့်မယ့်အလုပ်ပါမစ်ရမှခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားလူများ၏အရေအတွက်ကိုလျှော့ချလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်. အသစ်ကလျှောက်ထားအစားနှစ်ပေါင်းစောင့်ဆိုင်း၏ပထမဦးဆုံးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေတယ်ဆိုရင်, USCIS သူတို့ကောင်းတစ်ဦးအမှုရှိမဟုတ်လျှင်သူတို့ဖြစ်ကောင်းလျှောက်ထားမည်မဟုတ်ယုံကြည်နေ. ရသောအခါနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားသူဆင်းလှည့်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤသူကားအ, they may be removed from the USA
တချို့က asylees သူတို့ join ဖို့သူတို့သားသမီးသို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ဖက်ဆောင်ကြဉ်းနိုင်အောင်အတည်ပြုခံရဖို့အထိလေးနှစ်စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြ. သူတို့ကိုပင်ကြာကြာစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်မှအဘို့အလွန်ခက်ခဲပါလိမ့်မည်. လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စရပ်များအတွက်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်သည်ဤလျှောက်ထားများအတွက်မျှတသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှာဖွေ USCIS မေးနေကြတယ်. သငျသညျပြီးသားရှေ့နေနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီတဲ့ရှေ့နေကိုရှာတွေ့အကြံပြု.